Sekoly fianarana mozika: tafajoro ny « conservatoire » eken’izao tontolo izao | NewsMada
Voamarika ao amin’ny tantaran’ny mozika eto Madagasikara ny datin’ny 18 novambra teo. Nosokafana tamim-pomba ofisialy, tamin’io asabotsy io, ny “conservatoire national de Madagascar”, sekoly ara-panjakana, mampianatra mozika.
Tsy mitsanga-menatra i Madagasikara raha ireo tanora manan-talenta amin’ny mozika, amin’ny sokajy samihafa no resahina. Ny indrokely hatramin’izay, vitsy dia vitsy ireo nandalo sekoly ambony, manome diplaoma ara-panjakana, hany ka sahirana raha mba te hanohy fianarana mozika any ivelany.
Ankehitriny, voavaha izany olana izany. Tafajoro ny “conservatoire national de Madagascar” (CNM), etsy Anosy ary tantanin’i Luc Olivier Ratovo Andriamary, manampahaizana manokana amin’ny mozika, nivoaka avy amin’ny “conservatoire” any Frantsa. Sambany ny misy izany eto amintsika. Miankina amin’ny fanjakana ny sekoly ary ara-panjakana sy eken’izao tontolo izao ny diplaoma hatolony ireo mpianatra rehefa afaka amin’ny fanadinana hatrehiny.
Maharitra telo taona ny fianarana ao amin’ity “conservatoire” ity. Izany hoe, natao indrindra ho an’ireo misafidy ny mozika ho fototry ny asa hataony any aoriana any. Anisan’izany ireo maniry ny hampianatra mozika, na koa ireo te hanohy fianarana any amin’ny “conservatoire” any ivelany. Na izany aza, misy hatrany ny “cursus continu”, izany hoe karazana fiofanana ao anatina fotoana fohy (telo volana, enim-bolana) ao amin’ny sekoly.
Zava-dehibe ho antsika Malagasy ary anisan’ny antoky ny fiarovana ny maha Malagasy antsika ny fijoroan’ity “conservatoire national” ity. Ny antony, mitahiry ireo vakoka mozika na ireo hira taloha, tsy tontan’ny ela, ihany koa izy, araka ny fanazavan’ny taleny, Luc Olivier Ratovo Andriamary.
“Manangona ireny vakoka ireny ny “conservatoire” ary manoratra azy ireny ho solfezy mba tsy ahafahan’ny olona sasany manovaova azy. Eo koa ny mba hitahirizana azy ho an’ireo taranaka mifandimby”, hoy hatrany ny fanazavany. Azon’ny olon-drehetra atao ny mitsidika ireo tahiry ireo.
Marihina fa efa nanomboka ny 10 novambra teo ny taom-pianarana ho an’ireo mpianatra, andiany voalohany, ao amin’ny “conservatoire”. “Tsy lafo fa sahaza ny rehetra ny saram-pianarana noho ny sekoly miankina amin’ny fanjakana”, hoy ny taleny.